तामिल फिल्म ‘जय भिम’का अभिनेता सूर्यालाई ज्यान मार्ने धम्की, बढाइयो सुरक्षा
अमेजन प्राइममा रिलिज भएको तामिल फिल्म ‘जय भीम’ ले पछिल्लो समय निकै चर्चा कमाएको छ। चर्चासँगै फिल्म विवादमा मुछिएको छ। यो फिल्मका केही दृश्यबारे वन्नियार समुदायले आपत्ति जनाएको छ। यसअघि पनि यो फिल्मको एक सिनका कारण निकै ठूलो विवाद भएको थियो । वन्नियर समुदायका केही व्यक्तिहरुले यसका कलाकारहरुलाई पनि धम्की दिन थालेका छन् । फिल्मका अभिनेता सूर्यालाई बारम्बार धम्की आइरहेको छ। उनलाई धम्की आउने क्रम बढ्न थालेपछि उनको सुरक्षा बढाइएको जनाइएको छ। उनको घरबाहिर पाँच जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। तामिल फिल्म ‘जय भिम’ले आइएमडिबीमा हालसम्मकै चर्चित हलिउड फिल्म ‘द गडफादर’
अध्यक्षकप तेक्वाण्डो प्रतियोगिताको उपाधि आइटिएफ कानेपोखरीलाइ
मोरङ/ प्रथम अध्यक्षकप १ नं. प्रदेश स्तरीय तेक्वाण्डो प्रतियोगिताको उपाधि आयोजक आइटिएफ तेक्वाण्डो डोजाङ कानेपोखरीले हात पारेको छ । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका ६ रमाइलोमा सम्पन्न प्रतियोगितामा ८ स्वर्ण, ८ रजत र ९ कास्य पदक जित्दै उपाधि हात पार्न सफल भएको हो । प्रतियोगिताको द्वितीय सुनसरी भएको छ । सुनसरीले ८ स्वर्ण, २ रजत र ३ कास्य पदक हात पा¥यो । झापाले ७ स्वर्ण, ९ रजत र ६ कास्य पदक हात पार्दै तृतिय बनेको छ । महिलातर्फ उत्कृष्ट खेलाडी मोरङकी इन्दिरा थापा घोषित भइन् भने पुरुषतर्फ सुनसरीका निकेश कटुवाल भए । प्रतियोगिताको अनुशासीत टिम पाँचथर घोषित भयो । इस्पारिङ जुनियर महिलातर्फ २०–
शिल्पीको सार्थक रङ्गयात्रा धरानमा
धरान/ के तपाईं हाँस्दाहाँस्दै रुन र रुँदारुँदै हाँस्न चाहनुहुन्छ ? चाहनुहुन्छ भने शिल्पी थिएटरको ‘ठुला माछा–साना माछा’ तपाईंका लागि उत्तम विकल्प हुन सक्छ । यो नाटकले तपाईंलाई मनोरञ्जन मात्र दिने छैन, यसले समकालीन नेपाली जीवनमा विद्यमान् सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक बेथितिसँग पनि साक्षात्कार गराउनेछ । काठमाडौँको शिल्पी थिएटरका कलाकारहरूले सोमबार धराने दर्शकहरूलाई यसै गरी हँसाउँदै रुवाए र रुवाउँदै हँसाए । रङ्गयात्राको क्रममा मोरङ, झापा र सुनसरीका विभिन्न स्थानमा नाटक मञ्चन गरेर शिल्पीको टोली काठमाडौँ फर्किसकेको छ । यो यात्राको समापन शिल्पीले धरान सभागृहको परिसरमा सोमब
तिहारमा नगेन्द्रले देउसीभैलो गित ल्याउने
इटहरी/ तिहारमा देउसी खेल्ने परम्परालाई जर्गेनाका साथै संरक्षण गर्ने उद्धेश्यले नगेन्द्र दंगालले तिहारमा सार्वजनिक गर्ने गरी देउसीभैलो गित ल्याउने भएका छन । दंगालको शब्द, लय र स्वर रहेको देउसी गितको सुटिङ मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका वडा नम्बर ४का वडाध्यक्ष शैलेन्द्र श्रेष्ठको घरमा छायाँकन गरि सम्पादनको क्रममा रहेको छ । रोहित खनालको निर्देशन रहेको देउसी गितमा आर्दश बाल क्लवका कलाकारहरुका साथै सुनसरी र मोरङका संचारकर्मीहरुले अभिनय नृत्य गरेका छन । रेवती निरौलाको संयोजन रहेको देउसी गितमा हास्य मसलाका रुपमा बालकुमार थेबेले अभिनय गरेका छन भने घरमुलीका रुपमा घरधनी शैलेन्द्र श्रेष्ठ र परिवारको
लिम्बू गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
धरान/ लिम्बू गीत–सङ्गीतको क्षेत्रमा सेमिहाङ सिङ्गक नयाँ नाम होइन । सङ्गीतकार तथा गीतकार सिङ्गकले लिम्बू गीत–सङ्गीतको क्षेत्रमा महŒवपूर्ण योगदान दिएका छन् । उनले नेपाली भाषाका गीत–सङ्गीतमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् । उनै सिङ्गकको शब्द, स्वर तथा सङ्गीत रहेको लिम्बू गीत ‘पारेना पारेना’ को म्युजिक भिडियो भर्खरै सार्वजनिक गरिएको छ । सिङ्गककै अफिसियल युट्युब च्यानल सेमिहाङ क्रिएसनमार्पmत् भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो । सिङ्कले गीत र भिडियोमा आपूmहरूले पर्याप्त मेहनत गरेको बताए । कोरियोग्राफर तथा निर्देशक दिनेश माङ्मूको निर्देशनमा भिडियो निर्माण भएको हो । भिडि
पोखराको बन्जीले धरान जोड्दै
धरान । साहसिक पर्यटन खेलको माध्यमबाट धरानलाई पोखरा सँग जोड्न दुवै नगरका पर्यटन व्यवसायीहरुले सहकार्य गर्ने भएका छन् । पोखरामा शुरु भएको बन्जी खेलको प्रवद्र्धनका लागि धरान आएको बन्जी नेपालले साहसिक खेलको माध्यमबाट धरान र पोखरालाई जोड्न सकिने पुर्वाधारहरु निर्माणमा सहयोग गर्ने जनाएको छ । बन्जी नेपाल एडमेन्टर प्रालिका अध्यक्ष सन्तोष भट्टराईले धरानमा शुरु भएको प्याराग्लाइडिङ, जिप फ्लाईङ, स्काई स्काइल लगायतका साहसिक खेलहरुलाई पोखरामा प्रवद्र्धन गर्ने र पोखराको बन्जीको लागि धरानमा प्रवद्र्धन गर्दै दुवै नगरलाई पर्यटकीय नगरीको रुपमा जोड्ने बताए । उनका अनुसार पोखरामा बन्जी खेल्न आएका खेलाडीलाई धरान स
ज्ञान सुब्बाको ‘आखिर के को लागि होला’ छाँयाकंन शुरु
धरान / मंगलबार धरानको पुतली लाइन स्थित वेब क्याफे एन्ड चिकेन स्टपमा एक्सन कट चलिरहेको थियो । त्यहाँ हङकङ निवासी धराने गायक ज्ञान सुब्बाको गीतको छाँयाकंन भैरहेको थियो । वेटर र ग्राहकको रूपमा कलाकारहरु अभिनय गरिरहेका थिए भने निर्देशक भीषण राईले म्युजिक भिडियोको निर्देशन गर्दै थिए । निर्देशक भीषण राईले भिडियोमा नयाँ कन्सेप्ट पस्किन लागेको बताए । उनले भने “मैले यो भिडियोमा फरक कन्सेप्ट ल्याएको छु, दर्शकलाई नयाँ लाग्न सक्छ ।” धरान र चतराको विभिन्न स्थानमा दुई दिन लगाएर उक्त म्युजिक भिडियोको छाँयाकंन गरिएको थियो । ‘आखिर के को लागि होला ?’ बोलको म्युजिक भिडियोमा लोकप्रि
मिस पुर्वाञ्चल क्यालेन्डर २०७८ सार्वजनिक
धरान । कोरोना महामारीका कारण रोकिएको मिस पुर्वाञ्चलको आयोजक सिल्भर इन्टरटेनमेन्टले ढिलो गरि यस वर्ष पनि क्यालेन्डर प्रकाशन गरेको छ । मिस पुर्वाञ्चल आयोजना गरि विजेता सहित सहभागिहरुको फोटो राखेर प्रकाशित हुने क्यालेन्डर यस वर्ष पुरानै कार्यक्रमका मोडलहरुको तश्विर राखि मिस पुर्वाञ्चल क्यालेन्डर २०७८ सार्वजनिक गरिएको छ । मिस पुर्वान्चल २०१९ का बिजेता रिजु भट्टराई, फस्ट रनर अप एन्जल राई र सेकेन्ड रनरअप सिमरन लिम्बु र प्रतियोगीहरु अनुशा लिम्बु, शशी बिशंखेको तस्बिरहरु क्यालेण्डरमा संग्रहित छन् । ईमी मेकअप स्टुडियोको मेकअप र मिलान्ज स्टोर, ड्रेसेसरिज नेपाल, पुर्बेली ढाका टोपी ट्रेडर्स र ग्रेसियस बु
दमकमा निर्माणाधीन नेपालकै अग्लो ‘भ्यूटावर’को निर्माण कार्य ४०% सम्पन्न
झापा । दमकमा निर्माणाधीन नेपालकै अग्लो दृश्यावलोकन स्तम्भ (भ्यूटावर) को ४० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । १०० मिटर अग्लो र १८ तलाको सो भ्यूटावरको बेसमेन्ट र तेस्रो तलासम्मको निर्माण पूरा गरी चौथो तलाको ढलान भइरहेको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना भद्रपुरका इञ्जीनियर भूपेन्द्रकुमार यादवले बताए । चिनियाँ कम्पनी जेडसिजीआइइसी र ललितपुरको आशिष ओम साइराम निर्माण कम्पनीले रु एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजार १६४ मा भ्यूटावर निर्माणको ठेक्का लिएका हुन् । कोरोना महामारीको अवस्थामा समेत स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर तीव्र गतिमा निर्माण कार्य भइरहेको हुँदा भ्यूटावरको प्रगति सन्तोषजनक रहेको इञ्जीनि
रोहित मास्केको “चिसो चिसो हावा चल्यो” सार्वजनिक
धरान । धरानका गायक रोहित मास्केले आफ्नो नयाँ गीत “चिसो चिसो हावा चल्यो” विश्व संगीत दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत “लिरिकल भिडियो” को रुपमा सार्वजनिक गरिएको गीतमा गायक मास्केकै शब्द –संगीत समेत रहेको छ । जेम्स प्रधानले संगीत संयोजन तथा मिक्सिङ्ग गरेको गीत रेकर्डिङ्ग धरानको भावना स्टुडियोमा गरिएको हो । धरानका पुराना गायक रोहित मास्के लामो समयको विदेश बसाईपछि बिगत ५ बर्ष देखि आफ्नो व्यवसायसंगै फुर्सदको क्षणमा संगीतमा समेत समय दिने गर्दछन् । धरानमा हुने बिभिन्न सांगीतिक कार्यक्रममा समेत भाग लिईरहने गयाक मास्केले “चिसो चिसो